DHAGEYSO Xildhibaano ka tirsan Aqalka Sare ayaa ay si kulul uga hadlay fatahaada wabiga Shabeelle | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta DHAGEYSO Xildhibaano ka tirsan Aqalka Sare ayaa ay si kulul uga hadlay...
DHAGEYSO Xildhibaano ka tirsan Aqalka Sare ayaa ay si kulul uga hadlay fatahaada wabiga Shabeelle
Xildhibaano ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa kasoo jeeda deegaannada Hir-Shabelele ayaa waxa ay si kulul uga hadleen fatahaada wabiga Shabeelle uu ka geysanayo Baladweyne iyo dhibaatooyinka ka dhalanaya.
Sanoter Cusmaan Moxaamuud Dufle ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo gurmado Shacabka Baladweyne oo ay ku habsatay musiibada ka dhalatay fataahadaha uu geysanayo Wabiga Shabeelle.Waxaa uu sheegay in sanad kasta la qeylo dhaamiyo aysan waxba soo kordhineyn,isla markaana looga baahan yahay in xukuumadda Soomaaliya iyo Maamulka Hir-Shabeelle ay la yimaadaan qorsho cad.
Dhinaca kale Sanoter Fartuun Cabduqaadir Faarax ayaa dhankeeda sheegtay in dadka Reer Baladweyne ay xiligaan u baahan yihiin gurmad dhab ah,sidoo kalena Xukuumada Soomaaliya laga doonayo Ajande sax ah oo dhinaca gurmadka ah.
Waxaa ay sheegtay in sanad walba ay ka tacsiyadeeyaan dhibaatada ka dhaceysa Gobolka Hiiraan,waxaana ay ugu baaqay Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya inay si deg deg ah gurmad caafimaad ay la gaarto dadka ay saameeyen fatahaada Wabiga Shabeelle.
hoos kadhaqeyso codka xldhiaanada